January 4, 2021 - Padaethar
မိမိကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်း ….မဟာဘုတ်ဗေဒင်အရ တစ်သက်တာ အဓိပတိဖွား ဟောကိန်း
January 4, 2021 by Padaethar
ရှင်ဘုရင်ကြွလာဖို့ သူတောင်းစားတွေ လမ်းဖယ်ပေးရတာ ထုံးစံပါပဲ….
ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး ဘာလို့ ထားသွားကြတာလဲ သူနဲ့ ချစ်သူ စဖြစ်ကာစပေါ့… ကျွန်မနဲ့သူနဲ့ ချစ်သူစဖြစ်ကာစပေါ့ သူက ကျွန်မကိုပြောပြဖူးပါတယ် ….တကယ်က နှိုင်းပြတာပါ။ ကျွန်မနဲ့မတွေ့ခင်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူတွဲခဲ့ပါတယ် ….ခက်တာက ကျွန်မနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ထိ အဲ့ကောင်မလေးကို သူမမေ့သေးတာပါ။ သူ့စိတ်ထဲမှာလည်း အဲ့ဒီမိန်းကလေးက ကျွန်မထက်သာတယ်လို့ သူတစ်ထစ်ချ ယုံကြည်ထားတာပါ …. အဲ့ဒီကောင်မလေးက အရမ်းလှတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်လေးတစ်ရန်နဲ့ တူပါသတဲ့…. အဲ့ဒီဖိနပ်လေးကိုစီးလိုက်ရင် ဘယ်သွားသွားတင့်တယ်တယ် ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့….(သူချစ်တဲ့သူမို့ သူ့စိတ်က ဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပါ) ကျွန်မက ကျတော့ slipper နဲ့ တူပါသတဲ့ ဘာအဆောင်အယောင်မှ မပါတဲ့ ဖိနပ်ပါး ပွဲလယ်မတင့်ပေမယ့် စီးရတဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေလို့တဲ့… (ကျွန်မကိုတော့ သူမချစ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူ့အပေါ် ကျွန်မကောင်းတာ သိနေလို့ပြောတဲ့သဘောပါ) ကျွန်မသိလိုက်ပါတယ် သူပြောချင်တဲ့ သဘောကို … Read more
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ တော်တော်နာကျင်ရတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ဒါပေမယ့်သူမှ ကိုယ့်ဆီမှာ မနေချင်တော့တာ ကိုယ်က ဖမ်းဆုပ်ထားရင် ကိုယ်နာကျင်ရမှာထက် သူနာကျင်ရမှာက ပိုပြီး ၀မ်းနည်းစရာကောင်းပါ တယ်။ ကိုယ်ကပိုနာကျင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါ တယ် ၊ကိုယ်ကချစ်နေသေးပေမယ့် ကိုယ့်ကိုမချစ်တော့တဲ့သူ ၊ကိုယ့်အနားမှာ မနေချင်တော့တဲ့သူ တစ်ယောက် ဒီလို လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အနားမှာထားရတာ ဘယ်လောက် နာကျင် စရာကောင်းသလဲ။ အရင်တုန်းက ကိုယ့်ကို အချစ်တွေပေးခဲ့ပြီးသံယောဇဉ်တွေထားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက် က အခုလို ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသိ ရတော့ ပိုလို့တောင်ကြေကွဲရ ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တခါတလေ ရေနစ်သူတစ်ယောက်လို မီရာဖမ်းဆွဲလိုက်ပေမယ့် …. ကိုယ်ထင်နေသလို သစ်ကိုင်းတစ်ခက် မဟုတ်ဘဲ ဆူးခက်တစ်ချိုး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လက်ကိုဆူးတဲ့ဝေဒနာကို ကျိတ်မှိတ်ခံစားမနေဘဲ ရှိသမျှအားအင်နဲ့ ကြိုးစား ခူးခတ် တာကမှ လူပီသမှုဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်လေးကိုတောင်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းလဲပါ ကိုယ်က ပြောင်းလဲပေးလို့မရတဲ့အရာတွေနဲ့ … Read more
မိမိကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်း ….မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာအရတစ်သက်တာ ရာဇဖွားဟောကိန်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အင်္ဂလိပ်ရက်မွေးဖွားသော မိတ်ဆွေများအတွက် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း
အင်္ဂလိပ်ရက် ၁ ရက် ၊ ၁၀ ရက် ၊ ၁၉ ရက် ၊ ၂၈ ရက်မွေးဖွားသောမိတ်ဆွေများသည် ခရစ်သက္ကရာဇ်၂၀၂၁ ခုနှစ် မင်္ဂလာနှစ်သစ်တွင် ဝိဇ္ဇာ မ တဲ့အချိန် ၊ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ မ တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ် …။ ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီ…။အလုပ်ကိုင်အကြံစည်များ မြင့်မားတိုးတက် အောင်မြင်မယ်…။အဖက်ဖက်ကနေ မုချတိုးတက်မှုတွေကြုံရမယ်…။ပြီးခဲ့သောအချိန်ကာလတွေနဲ့မတူတော့ဘူး။ အခုကောင်းပြီ။ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်၊အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင် ရေး၊ခရီးသွားလာရေး ဘယ်အရေးမဆို အားလုံး ကောင်းနေမယ်…။အောင်မြင်တဲ့အထိလုပ်ဖို့ စိတ်အား လူအား ပျော့ညံ့လျော့နည်းသွားတတ်တာကိုတော့ သတိထားပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကံအလွန်ကောင်းနေပြီ..။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှ ရဲရဲလုပ်ပါ။မီးကုန်ယမ်းကုန်လုပ်ပါ။အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက စိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊ရှောင်လွှဲဖို့ခက်တဲ့အကျဉ်းအကြပ်တွေ၊တမင်သက်သက်ချောက်တွန်းခံရတာတွေကိုတော့ သတိထားသင့်။ မိမိနေထိုင်တဲ့ ၊ မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ မကောင်းတဲ့အတတ်များ၊ပညာများရှိနေအံ့။မသန့်မရှင်းဖြစ်နေအံ့။ ရှာလကာရည်နှင့်ရေနှင့်ရောပြီး မကြာခဏ ပက်ဖြန်းပေးပါ။ … Read more
2021ကို ယူမသွားသင့်တဲ့အရာ (၈)ခု
2021ကိုယူမသွားသင့်တဲ့အရာ (၈)ခု ကို ထားခဲ့ပါ။ 2020 မှာ ချန်ထားပြီး 2021 ကို ယူမသွားသင့်တဲ့ အရာ ၈ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ကျိုးပဲ့နေတဲ့ ဆက်ဆံရေး …..ဆက်သွယ်မိတဲ့ အခါတိုင်း သင့်စိတ်ကို တွေဝေစေတဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ လက်ရှိ သင်နေထိုင်နေတဲ့ ဘဝပုံစံကို လမ်းချော်သွားစေမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ အားလုံးကို နောက်မှာထားခဲ့ပါ။ အချစ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိရင် လုံးဝထားခဲ့ပါ။ (၂)အများနောက်လိုက်ခြင်း…..အများက လုပ်တာနဲ့ လိုက်လုပ်တဲ့ အကျင့်ကို ထားခဲ့ပါ။ အများက လူတစ်ယောက်ကို ဝေဖန်နေပြီဆို လိုက်ဝေဖန်စရာမလိုပါဘူး။ လူတွေ ပြောင်းနေကြတဲ့ ဖေ့ဘွတ်ပရိုဖိုင်ကိုလည်း ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။ သင်တကယ်ကြိုက်မှသာလုပ်ပါ။ (၃)ကြိုးစားရမှာ ကြောက်ခြင်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကိုလုပ်သင့်တယ်၊ လုပ်လိုက်ရင်လည်း ကိုယ့်အခြေအနေ တိုးတက်သွားမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ … ကြိုးစားရမှာ … Read more